Qaaxo iyo Qawlaysatdii Jwxo-shiil oo Fashilmay – Rasaasa News
Qaaxo iyo Qawlaysatdii Jwxo-shiil oo Fashilmay
Apr 30, 2010 been, dhac, dil, Itobiya, Jwxo-shiil, Qaaxo, qabyaalad, wareer
Maxamed Ismaciil [qaaxo], oo ay bahashii ku dilaacday [tb], kalana garan la,a maalmaha, bilaha iyo sanadka lagu jiro midna, walina doonaya in uu dadka been u sheego, oo uu ku duufsado qoraalo wada dhan saar ah, dadweynaha ogg dambiyada ay isaga iyo Jwxo-shiil ka galeen ummada Somalida Ogadeeniya.
Qaaxo, waxaa uu ka mid yahay saddexda nin ee ugu saraysay kooxda Jwxo-shiil, waxayna taariikhdu cadaynaysaa in uu kow ka yahay dadka halganka cuqdad iyo qabyaalada ku burburiyey, isaga iyo Jwxo-shiil, ayna taariikhdu sugayso xiligeeda.
Maxamed Ismaciil [Qaaxo], waxaa uu ahaa ninkii kolkii uu khilaafku soo dhex galay ururka ONLF, ee in la xaliyo la damcay diiday, diidmadiisuna ma ahayn u danayn ururka ee waxay ahayd mid cuqdadeed. Qaaxo waxaa uu ahaa ninkii kolkii ay kooxda Jwxo-shiil dishay Dr. Dolal, ku taliyey in lagu aaso meel aan la ogayn, sawirada maydkiisana loo dhiibo Kilalka.
Qaaxo, waxaa uu ahaa ninkii Maraykanka kol uu joogay 2009 yidhi dadka naga soo horjeedsaday waa hal beel, saddex bilood ayaan u qaban beeshaas. Qaaxo, waxaa uu ku dhsahay Qoraxey, waxaana dhashay gabdh ah beesha uu neceb yahay, wuxuuna qabaa Gabadh isla beesha ah, waligiina xoolo aan xoolaha reer Abtigii ahayna ma cunin. Dalka Jarmalka oo 6 sano uu sharci la,aan ku ahaa waxaa ka kaxeeyey Dr. M S Dolal iyo Xansan Qoryooley oo uusan midna abaal u galin.
Qaaxo, waxaa weeye ninkii qori jiray boggii Haleelo.com, ee bilaabay cayda beelaha Ogadeen iyo shakhsiyaadka, aan cayda lahayn, kolkii lagu fahmayna far yaro bidix ayuu ka baxay.
Maxmed Ismaciil [qaaxo], isaga oo ah ninkaas waa yaab in uu is garan waayo kolka ay bahashu ku kacdo, isaga oo leh bulshada Somalida Ogadeeniya waxaa loo qaybiyey qabyaalad, ma Itobiyaa Ogadeen kala taqaan? jawaabtu waa maya. ONLF oo ay afar ku ahaayeen kolkii uu qabyaalad ka dhex abuuray oo ay burburtay, suurto gal ma tahay in Mr. Qaaxo iyo kuwa aan ognahay ay wanaag hal galin keeni dhibaato mooyee? jawaabtu waa maya.
Qaaxo, waxaa uu sheegay in kooxda Jwxo-shiil ay guulo ka gaadhay dagaal ay la gashay ciidanka ugu tababarka fiican ee Itobiya, ayna baabi,iyeen ciidankaas, tolow yuu wax u sheegayaa.
Sidaas daraadeed, Qaaxo waxaan u malaynayaa laba mid uun; in uusan fayoobayn oo uusan aduunba la socon iyo in uusan ideecadna dhagaysan waxna akhriyin oo uu iloobay wax akhrintii.
Mr. Qaaxo, warqada kuma qorin magaca kooxda Jwxo-shiil, wuxuuna sheeganayaa ku xigeenka kowaad Jwxo-shiil, isla markaasna waxaa uu hoosta ka raaciyey hadalkii ay kooxdu isticmaali jirtay iyo magaciisa, wuu wareeray [confuss].
Qaaxo 25-kii sano ee ugu dambeeyay waxaa uu ku jiray nolol qaxooti, waxaana uu wax u sheegaa dad isaga ka sii aqoon hooseeya, waxa uu u sheegaana waa been, waana beentaas mida uu qoray.
Waxaa intaas u dheer waxaa uu qoray shalay in dagaal ay ku jabiyeen Itobiya May 16 2010, taariikhdaas oo aan wali la gaadhin, balse ay waalidu ka keentay.
dhawr qaaxo waxa uu ku qoray, ogadennet.com iyo qorahey.com
Dawlada Itobiya oo ka Gaabisay in ay Difaacdo Gabalka Ogaden
ONLF, Garabka Maxamed Cumar Cismaan oo Bilaabay Caga Juglayn iyo Hanjabaad ka Dib Heshiiskii Xabad Joojinta Ahaa ee UWSLF la Gashay Dawlada Itobiya.